Marvel ရုပ်ပြမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego ရှိပါတယ် Star Wars ၇၅၃၁၂ Boba Fett ရဲ့ Starship နာမည်အသစ်ရခဲ့လား။
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 217 Views စာ0မှတ်ချက် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, Boba fett, Bossk ပါ, ရုပ်ပြ, Disney, Lego, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Star Wars
Lego Star Wars ၇၅၃၁၂ Boba Fett ၏ Starship သည်အခြားနာမည်သစ်အဖြစ် Slave I အတွက်နောက်ဆုံးနာမည်မဟုတ်ပေ
12 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 196 Views စာ0မှတ်ချက် 76140 သံက Man Mech, 76168 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် Mech လက်နက်, 76169 Thor Mech သံချပ်ကာ, 76198 Spider-Man & ဆရာဝန် Octopus Mech တိုက်ပွဲ, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ရုပ်ပြ, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Mech, တွစ်တာ
21 / 07 / 2021 21 / 07 / 2021 Dimitri 624 Views စာ0မှတ်ချက် 10181 Eiffel မျှော်စင်, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဓါးရွက်, Daredevil, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego Spider-Man, LEGO.com, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, မိုင် Morales, သေးသေးလေး, ပတေရုသက Parker, ဆမ် Raimi, Spider-Man, Spider-Man: အ Spider-အခနျးငယျထဲသို့, အဆိုပါ Incredible Hulk, အပြစ်ပေးသူ
Lego ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် MarvelLoki minifigures
10 / 06 / 2021 10 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 396 Views စာ0မှတ်ချက် 10721 Loki vs. သံက Man, 6867 Loki's Cosmic Cube Escape, 6869 Quinjet ဝေဟင်တိုက်ပွဲ, 76088 Hork vs Thor: Arena Clash, 76091 Mighty Micros: Thor နှင့် Loki, 76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ, ရုပ်ပြ, Disney, Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ရုပ်ပြ, MCU, streaming များ, superhero, Superheros တွေက
ဒဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ Marvelနောက်ဆုံးတွင်ဒီမှာ Loki စီးရီးသည်သူ၏မကောင်းသောအပြုအမူ၏သမိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်ပိုကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်
09 / 04 / 2021 09 / 04 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 590 Views စာ0မှတ်ချက် Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းမှု, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego စျေးဝယ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စတူဒီယို, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel စူပါ Heros, MCU, TFATWS, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision
Is MarvelLEGO အတွက်သင့်တော်တဲ့ Carnage?
13 / 03 / 2021 13 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1183 Views စာ0မှတ်ချက် 76036 Carnage ရဲ့ SHIELD Sky Attack, 76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel စူပါ Heros, Marvel's Spider-Man, Spider-Man, အဆိပ်: သုတ်သင်မှုရှိပါစေ
Lego Marvel 76199 Carnage သည်သံခမောက်လုံး၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဤစူပါဟီးရိုးရန်သူသည်အနည်းငယ်ဆိုးရွားလွန်းသည်
Lego ရှိပါတယ် Marvel ၇၆၁၉၉ Carnage ကနောက်ထပ် supillain တွေဆီကိုပြသလိုက်သလား။
12 / 03 / 2021 12 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1408 Views စာ0မှတ်ချက် 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, တွေဆီကနေ, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, သံခမောက်, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Movie,, supervillain, အဆိပ်, အဆိပ် 2, အဆိပ်: သုတ်သင်မှုရှိပါစေ
အသစ်ပေါ်ထွက်လာ LEGO Marvel 76199 Carnage အစုံသည်သံခမောက်ကိုခံယူမည့်နောက်ဇာတ်ကောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မတော်တဆအရိပ်အမြွက်ပြောဆိုသည်
22 / 02 / 2021 22 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 627 Views စာ0မှတ်ချက် 31199 Marvel Iron Man စတူဒီယိုများ, 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး, 76166, 76175 Spider-Man Spider Lair ကိုတိုက်ခိုက်ပါ, art, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, ရုပ်ပြ, Lego, LEGO art, Lego မှ marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel စူပါ Heros, Marvel's Spider-Man, Spider-Man
တစ် ဦး LEGO ဖြစ်ပါတယ် Marvel လမ်းပေါ်တွင်စုဆောင်းထားသော Minifigure စီးရီး?
13 / 01 / 2021 18 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1450 Views စာ0မှတ်ချက် စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ရုပ်ပြ, Lego, Lego ယိုစိမ့်မှု, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MARVEl ဇါတျရှငျဇါတျလိုကျ, Marvel ရုပ်ပြ, အသေးစား, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, စူပါသူရဲကောင်းများ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များစာရင်းတွင်အွန်လိုင်းပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ LEGO သည်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည် Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီး